James Fenimore Cooper, ndụ na ụbọchị abụọ. Ode okwu nke oru ya. | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
James Fenimore Cooper. Nke ikpeazụ nke ndị Mohicans na ọrụ ndị ọzọ.
James fenimore na-emezi Amụrụ ya na Septemba 15, 1789 wee nwụọ na Septemba 14 mgbe afọ 62 gachara. Nwa akwukwo America a dere ihe karịrị akwụkwọ akụkọ 30 raara onwe ya nye karia ihe nile banyere ndu nke ndị ọsụ ụzọ oge ochie na American West na esemokwu ha na ọgụ na ndị India. Akwụkwọ akụkọ ya kacha mara amara na ọ ga-abụ Ikpeazụ Mohican, nke 1826. Mana ọrụ ya n'ozuzu nwetara ọtụtụ ama. Nke a bụ nyochaa nke ya na ụfọdụ nke ahịrịokwu ya.
1 James fenimore na-emezi
2 Ikpeazụ Mohican
3 Nsụgharị Cinematic
3.1 Nkebi ahịrịokwu 5
James fenimore na-emezi
Fenimore Cooper mụrụ na Burlington, New Jersey, ndị 15 Septemba nke 1789 o we nwua 14 Septemba nke 1851 en Obodo Cooperstown, New York. Ọ gụrụ akwụkwọ na Albany, New York, na Yale, oge ọ nọ n'ebe ndị ahụ nyekwaara ya aka imeta ọbụbụenyi ma soro ezinụlọ dị iche iche nwere mmekọrịta chiri anya.
Aha akwukwo mbu o dere Utionkpachara anya, nke bụ a okpu. Ma ọ bụ ihe ndị na-esonụ, Onye nledo, nke ga-akọwapụta ọrụ ya ma emechaa ya na ụdị ya ma ọ nwetara a ihe ịga nke ọma nke akwusighi igbochi. Akwụkwọ akụkọ ya kachasị ama ama Ikpeazụ Mohican (o Nke ikpeazu nke mohicans ka asughariri ya). N'ime ya ọ na-egosi anyị isiokwu nke mara ya ruo mgbe ebighi ebi: ókè-ala na ndu di ike nime ha, ndi mbu na ndi-ọbịa nke nnukwu obodo North America ka achoputaghi, ya na mmekorita ya Ndị India, ndị bi n’ala ndị ahụ.
Ọrụ nke a gbadachara ndị ọzọ, ma o dere ihe karịrị akwụkwọ akụkọ 30 nke ụdị a. Na usoro ya, n'aka nke ọzọ, enwere oke ọdịiche dị n'etiti ime ihe ike nke na-adị mgbe ụfọdụ na akụkọ na nwayọ nke prose ya na amaokwu ụfọdụ ma ọ bụ nkọwa. Ma tnke ihunanya, nke na-akpali agụụ mmekọahụ na agụụ, abụghịzi n'ihi isiokwu ndị e dere ọbụbụenyi, ịhụnanya, iguzosi ike n’ihe, dimkpa, nsọpụrụ ma ọ bụ ịchụ àjà, kama maka ịtọlite ​​akụkọ.
Ebu ụzọ bipụta ya na Abụọ 1826. Ọ bụ akwụkwọ nke abụọ nke ọ bụ a pentalogy oku Leatherstocking Akụkọ. Edere akwụkwọ ise a ihe karịrị afọ iri na asatọ, a na-ewere ha dị ka ndị kachasị nnọchi anya nke ihe a maara dị ka Akụkọ banyere dike nke North America.
Ngwakọta usoro akụkọ ihe mere eme na njem dị iche iche ma lekwasị anya na mgba Franco-Bekee nke narị afọ nke XNUMX. Akpado ya bu Nnukwu Anya, nwa mgbei nke ndị India were. Ihe mebere ya dum Ndị ọsụ ụzọ, Ikpeazụ Mohican, Ahịhịa, Ihe nchọgharị ahụ y Mgbada Hunter.
Akụkọ a na-akọ na Ikpeazụ Mohican na-ewere ọnọdụ na 1757, n’oge Agha Afọ Asaa ahụ mgbe France na Great Britain lụrụ ọgụ maka ịchịkwa ógbè ndị dị n’Ebe Ugwu America. Ndị France chọrọ enyemaka nke agbụrụ ndị American Indian iji buso ọtụtụ ndị ọbịa Britain agha.
Ọ na-akọ akụkọ dị egwu nke dinta Hawkeye na ndị ibe ya nke ebo Mohicans, Chingachgook na nwa ya nwoke Uncas, ndị na-echebe Alicia na Cora Munro, ụmụ nwanyị nke onye ọrụ gọọmentị England na-ahụ maka Fort Henry, ndị agha France nke General Montcalm na ndị ya na ha jikọrọ aka, ndị Huron India, nke ndị agha obi ọjọọ Magua na-edu.
Maka ndị kacha dị nkọ Mgbe a bịara n'ịgụ akwụkwọ, ịnwere ike itinye aka na nsụgharị nkiri ahụ dabere na ọrụ Cooper.
E nwere nke mbụ na dị nnọọ afọ 1920, nke ndị isi nduzi Maurice Tourneur na Clarence Brown, na Harry Lorraine na Wallace Beery. Gbanye 1936 George Seitz mere ọzọ na Randolph scott na ndu ndu. Na na 1977 e mere nsụgharị maka telivishọn con Steve Forrest, onye ama ama Lieutenant Harrelson nke Mụ nwoke Harrelson, dị ka protagonist.
Ma enweghị obi abụọ ọ bụla ihe a kacha mara amara bụ nke e mere na 1992, duru ya Michael Mann. Ha gụrụ kpakpando na ya Daniel Day-Lewis, Madeleine Stowe, Wes Studi, Patrice Chéreau na Pete Postlethwaite na ọrụ ndị isi.
Nkebi ahịrịokwu 5
Ọ bụ mmadụ ole na ole gosipụtara ụba bara ụba, ma ọ bụ, iji tinye ya nke ọma, nkwenye nke akparamagwa karịa onye amaala North America. N’agha ọ dị mpako, na-etu ọnụ, dị aghụghọ, na-enweghị obi ọjọọ, na-agọnarị onwe ya, ma n’otu mgbe ahụ, ọ raara onwe ya nye; n'udo, ọ bụ onye ezi omume, onye na-emesapụ aka, onye na-anabata ndị ọbịa, onye na-akwụ ụgwọ, onye nwere nkwenkwe ụgha, onye obi umeala, na onye nkịtị.
Pathzọ ọ bụla nwere njedebe ya na ọdachi ọ bụla na-eweta ihe mmụta ya.
Anurum na odi ndi nwoke guru akwukwo iji kwenye onwe ha na Chineke di. Amaghị m, mana mmadụ nwere ike gbanwee ọrụ ya na mpaghara, ịhapụ ihe doro anya n'ọzara dịka obi abụọ n'etiti ndị ahịa na ndị ụkọchukwu.
Chingachgook jidere aka na, na mmetụta ịhụnanya, onye nyocha ahụ agbasaala ụwa ọhụrụ, na n'omume ọbụbụenyi ndị a na-enweghị atụ ụjọ osisi na-ehulata isi ha, ebe anya mmiri na-ere ọkụ dara n'ụkwụ ya, na-agba ili Uncas mmiri dị ka mmiri ozuzo.
Ọ bụghị! Nọgide na-adị ndụ! Jide, ị nwere ike ịnụ m? I siri ike, lanarị. Nọgide na-adị ndụ, n'agbanyeghị ihe na-eme! Aga m ahụ gị. N'agbanyeghị oge ole ọ ga-ewe, ebe tere aka, aga m achọta gị ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » ụdịdị » Novela » James Fenimore Cooper. Nke ikpeazụ nke ndị Mohicans na ọrụ ndị ọzọ.
Granada Noir: Alhambra na-enwekwa mmasị maka akwụkwọ akụkọ mpụ.